क्यालिफोर्नियामा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार, कम्तिमा १२ जना मारिए, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
एजेन्सी । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित एक होटलमा आक्रमणकारीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा दर्जन व्यक्तिको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ ।
समाचारअनुसार यो घटना स्थानीय समयअनुसार बुधबार राती करिब ११ बजे भएको हो । होटलमा करिब २ सय जना मानिस रहेको बेला आक्रमणकारीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा त्यहाँ भागाभाग भएको थियो । आक्रमणमा परेको होटल लज एन्जलसदेखि करिब ६५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको बताइएको छ ।
अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीले सो घटनामा आक्रमणकारी पनि मारिएको र अन्य १२ जना मारिएको पुष्टि गरेका छन्। कलेजको सांगीतिक पार्टी भइरहेका बेला सो आक्रमण भएको बताइएको छ ।
भेटुरा काउन्टीका शेरिफ अफिसका प्रवक्ता एरिक वस्कोले सुरक्षा अधिकारी घटनास्थलमा पुगेपछि पनि गोली चलेको आवाज आएको बताएका छन् । उनले धेरै मानिस मारिएका, धेरै घाइते भएको र मारिनेमा एक जना शेरिफका अधिकारी पनि भएको बताए । प्रहरीले घटनामा पीडित हुनेको संख्या बढ्न सक्ने बताएको बीबीसीले जनाएको छ ।
प्रत्यक्षदर्शीले आक्रामण हुँदा त्यहाँ भागाभाग भएको र गोली लागेर कयौं मानिस घाइते भएको जनाएका छन् । एक प्रत्यक्षदर्शीले आक्रमणकारी निकै भयानक रहेको समेत बताए ।
समाचारअनुसार आक्रमणकारीले पहिला स्मोक ग्रिनेड प्रहार गरेको र त्यसपछि अन्धाधुन्ध गोली चलाएको बताइएको छ ।